Sina ZR-2021 Orinasa mikraoba mikraoba mikraoba mikoriana mikraoba sy mpanamboatra | Junray
ZR-2021 Sampona mikraoba mikoriana mikoriana be azo ampiasaina ho fitaovana manokana hanaraha-maso ny tontolo iainana amin'ny andrim-panjakana fanaraha-maso, foibe fanaraha-maso aretina, hopitaly, sampan-draharaha miaro ny tontolo iainana, ary mety indrindra amin'ny fanaraha-maso ny fiarovana voajanahary amin'ny toerana manan-danja toy ny fanaraha-maso ny fiarovana ny seranam-piaramanidina sy foibe fihaonambe lehibe.
Teknolojia mifantoka sy manasaraka Ultra, mahatsapa fofonaina lehibe ary onja kely mikoriana.
Fanaraha-maso mikoriana elektronika avo lenta, mahatsapa fanaraha-maso marina ny lalana 3.
Fotoana fohy santionany, fahombiazana avo.
Fanerena ratsy ratsy, mpankafy fifanakalozana lehibe, antony manosika mafy, tabataba ambany.
Fandraisana lamba 5-inch, mora ny atiny ary mora ny fandidiana.
Volavola azo alefa, ny mpampiantrano sy ny santionany mifantoka dia azo sarahina sy atambatra.
Manohana mpanonta haingam-pandeha haingam-pandeha any ivelany.
Tohano ny fanondranana angon-drakitra USB, fitehirizana angona angon-drakitra matanjaka.
Fiarovana mandeha ho azy mandritra ny santionany, tohizo ny santionany aorian'ny fampifandraisana azy amin'ny herinaratra.
Ny masontsivana lehibe
Error permitted maximum (MPE)
Sampling mikoriana A 924L / min 1 L / min ± 2.5%
Sampling mikoriana ny B 77L / min 1 L / min ± 2.5%
Sampling mikoriana ny C 7L / min 0,1 L / min ± 2.5%
Fanerena alohan'ny flowmeter (-30 ~ 0) kPa 0,01 kPa ± 2.5%
Temperature alohan'ny flowmeter (F20 ~ 150)℃ 0,1℃ ± 0,5 ℃
Hery miasa AC220V ± 10% 50Hz
Ny mari-pana miasa -20 ~ 45 ℃
Fanerena ny tontolo iainana （60 ~ 130） kPa
Fanjifana herinaratra an'ny mpampiantrano
Haben'ny mpampiantrano （Halavany 380 × sakany 240 × haavony 285） mm
Lanjan'ny mpampiantrano Tokony ho 9㎏
Teo aloha: ZR-2050A Sampana mikraoba mandeha amin'ny rivotra
Manaraka: Testeran'ny fahombiazan'ny sivana bakteria (BFE)
Sampler mikraoba vita amin'ny rivotra
Mpanapaka mikraoba mitsingevana
Sampelan'ny mikraoba miakatra amin'ny rivotra mikoriana